wararka maanta-arlaadii.net » DAAWO Sawirada: Dhaarinta Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Federaalka oo bilaabatay
Sanbalolshe Oo Soo Jeediyay Talooyinka Dhanka Amaanka ah
Gudiga Gurmad Oo Hal Malyan Dollar Gaarsiiyay Goobihi Fatahaadaha
Wasaaradaha Howlaha Guud Ee Maamul Goboledyada oo Si wada Jir ah U soo Saaray War Saxaafaded
Imaaradka oo Laba Diyaaradood Ku Dajiyay Magalada Hargeesa Ee Somalida
Kooxda Daacish oo Sheegatay Dil Maanta ka dhacay Degmada Hodan Magalada Muqdisho
Axmed Madoobe Oo Weerar Afka Ah ku qaaday Hay’adaha Ka Howl Gala Jubaland
Qarax Ismiidamin ah Oo Maanta Ka Dhacay Degmada Afgooye ee Shabeleda Hoose
Raisul wasaare ku Xigenka Dalka o Maanta Shir Gudoomiyay shir loogu Hadlaayo Xagjirka iyo Argagaxisada
Qarax Qasaare Geystay oo Muqdisho Lagula Eegtay Ciidamada Dawlada
Wabiga Shabeele Oo Ku fatahay Degmada BuulaBurte
DAAWO Sawirada: Dhaarinta Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Federaalka oo bilaabatay
Waxaa goor dhow Dugsiga sare ee Tababarka Booliska Gen Kaahiye Ex School Polizio ka bilaabatay Munaasabada dhaarinta Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Federaalka iyo kalfadhiga 1aad ee Baarlamaanka 10aad,
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka Avv. Ibraahim Iidle Saleebaan ayaa Xildhibaanada labada Aqal dhaarinaya, iyadoo loo dhaarinayo min 30 Xildhibaan, iyadoo gacanta midig saaraya Kitaabka Qur’aanka Kariimka.
Xildhibaanada la dhaarinayo ayaa gaaraya 243 Xildhibaan, kuwaasoo 41 ka mid ah ay yihiin Xildhibaanada Aqalka Sare.
Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo kulanka furay ayaa sheegay in markii u horeysay 47 sano uu xilka la wareegay Baarlamaan ay soo doorteen shacabka Soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigay
Jawaari ayaa sheegay in qofka ugu da’da weyn ee Xildhibaanada labada aqal uu noqonayo Guddoomiyaha KMG ee shir-guddoonka heyn doona.
Waxaa la filayaa marka la soo gaba gabeeyo dhaarinta uu si rasmi ah u furmo kalfadhiga 1aad ee Baarlamaanka 10aad, waxaana shir guddoomin doona ninka ugu da’da weyn.
Ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana la xiray waddooyin badan oo ku yaala magaalada qeybaheeda kala duwan, iyadoo dadka meelaha qaar ay lugeynayeen.
Madaxda Madasha oo go’aan ku gaaray in dib loogu celiyo doorashada 5-kursi
IDIRIS CABDI DHAQTAR oo doonaya in loo doorto afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya, Shariif Xasan oo cadaadiska ku batay